Escola sem partido : volavolan-dalàna hanao “hazalambo” ireo mpampianatra ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2019 13:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Català, Português
Hatramin'ny nisian'ny fifidianana, mbola mihotakotaka ny endrika politika breziliana. Ankoatra ny fandrahonana mitambesatra amin'ny zo hanao fihetsiketsehana [fr] any amin'ny oniversite, dia mbola manaraka amim-pahavitrihana ny tetikasa Escola Sem Partido (Sekoly tsy misy antoko) izay mety hametraka amin'ny fomba ofisialy ny “hazalambo” ikendrena ireo profesora ny firenena.
Araka ny mpiaro azy, io tetikasa io no hamarana ny “fanasana atidoha” ataon'ny mpampianatra lazaina ho avy amin'ny “ankavia” amin'ny mpianatra. Tao amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny tranonkala antsoina ihany koa hoe “Escola Sem Partido”, manampy kokoa ny fomba fijerin'ny vondrona ny fanazavana nomen'ny iray amin'ny mpanoratra ny volavolan-dalàna :
Fitsapan-kevitra iray notontosain'ny BBC Brasil, tamin'ny fanombohan'ny volana novambra, no mampiseho fa na dia mbola tsy nolaniana aza, dia efa niantraika sahady tany amin'ny fiainana andavanandron'ny lakilasy rehetra manerana ny firenena izany.
Mbola eo am-pandinihana ao amin'ny kongesy nasionaly ity lalàna federaly izay ahafahana mampihatra ny Escola Sem Partido manerana ny firenena ity, na dia mbola nahemotra aza ny fandaniana azy. Ankoatra izay, mbola nampafana kokoa ny adihevitra ny toe-javatra iray nitranga tamin'ny fiandohan'ny volana novambra, ny raharaha depiote federaly [fr], Ana Carolina Campagnolo, mpiray antoko amin'i Jair Bolsonaro.
Vao hita izany toe-javatra izany dia nisy vondrona mpampianatra nanomboka fanentanana hanoherana ilay depiote. Vokatr'izany ny fampanoavana tao Santa Catarina nanameloka ny depiote handoa onitra 70 000 R$ noho ny fahavoazana ikambanana ara-maoraly, araka ny nolazain'ny gazety O Estado de São Paulo. Ankoatra izany, nihevitra ny fitsarana fa tokony hofafany ny hafatra mandrisika ny “fiampangana” amin'ny tambajotra sosialy rehetra.
Volana vitsivitsy lasa izay, resy teo amin'ny fitsarana i Ana Carolina raha nitory ny profesora Marlene Fáveri, avy ao amin'ny Oniversitem-panjakana an'i Santa Catarina. Araka ny filazany, nolazainy ho tratran'ny fanilikilihana izy noho ny heviny “antifeminista” sy “kristiana”. Notsoahina ny fitoriana noho ny tsy fahampian'ny porofo.
Tsy vaovao ny tsirinkevitry ny volavolandalàna. Ny mpanorina sady mpitarika azy, ny mpisolovava Miguel Nagib, no nanolotra “lalàna iadiana amin'ny fihoaram-pefin'ny fahalalahana hampianatra”.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny gazety Folha de São Paulo, na ny Escola Sem Partido na ny lazaina ho “ideolojian'ny genre [lahy/vavy]” dia nifototra avy amin'ny fivavahana ary tsy i Brezila ihany no sahanin'izany.
Iray amin'ny fitaovam-pandresendahatra lehibe nentin'i Bolsonaro nandritra ny taona maro io tolokevitra io. Vitany hatrany amin'ny famoahana ao amin'ny tambajotra sosialy ny maodelin'ny “kopia ivelan'ny fitsarana” ahafahan'ny fianakaviana miampanga ireo mpampianatra. Tsy hitany anefa izay olana raha nahita tao amin'ny sekoly miaramilam-panjakana ao Manaus voarakitra tamin'ny taona 2017 ny lahatsarin'ny mpianatra miantso ny “arahaba amin'ny firenena” izy.
Na dia manonona ny marxisma hatrany aza izy rehefa milaza ny tetikasany, dia tsy namaritra mihitsy izany i Bolsonaro. Tao amin'ny sioka iray tamin'ny taona 2016, ohatra, ampangainy ny “fanasana atidoha ideolojika” ataon'ny mpampianatra izay tsy milaza mazava fa i Adolf Hitler (1889-1945) sy ny nazisma dia “sosialista”. Teoria iray izany neken'ny Breziliana tanteraka tamin'ity taona ity [fr].
Mety hampanahy tanteraka izany fanakanana ny mpampianatra hiasa am-pahamalinana na fanakanana resaka fananahana izany eo amin'ny zavamisy breziliana. Amin'izao fotoana izao i Brezila no mitazona ny tompondaka ary mbola miakatra ny isan'ny herisetra mihatra amin'ny olona LGBTQ. Voarakitra ihany koa fa mihoatra noho ny salanisa ankapobeny ny isan'ny ankizivavy bevohoka ao Brezila raha oharina amin'ny ao Amerika Latina manontolo (zazavavy adolantsento 68,4 isaky ny arivo no bevohoka) ary mitombo be ihany koa ny isan'ny tanora manomboka 15 ka hatramin'ny 24 taona ifindran'ny viriosy VIH.
Farany, araka ny nolazain'ny mpahay tantara Leandro Karnal, izay iezahan'ny mpiaro ny Escola Sem Partido porofoina ihany koa dia ny hoe “politika daholo izay fanehoan-kevitra rehetra, tafiditra amin'izany [izay tafiditra ao amin'io volavolan-dalàna io]”.
Naotin'ny tonia : taorian'ny fanemorana maromaro, nanapakevitra ny filohan'ny vaomiera manokana ao amin'ny Parlemanta, Marcos Rogério (DEM) [fr], ny hampirina ny volavolan-dalàna Escola sem Partido. Hifarana amin'ity taona 2019 ity ny fotoam-piasan'ny ao amin'ny andrimpanjakana mpanao lalàna. Mety hisy noho izany ny famelomana indray ny adihevitra momba ity lohahevitra ity.